थाह पाउनु भएको छ महिलाका सात गोप्य कुरा ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
थाह पाउनु भएको छ महिलाका सात गोप्य कुरा ? हेर्नुस्
एजेन्सी । अधिकांश पुरुषलाई महिलाका रहस्यबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले होला एक साहित्यकारले महिलालाई ‘फरेन ल्याण्ड’ अर्थात् विदेशी भूमिको सज्ञा दिएका । कहिलेकाँहि पुरुषहरु महिलाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको ठानेर भ्रममा समेत पर्ने गर्छन् । किन कि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन महिलाले पुरुषलाई थाहै दिँदैनन् । यहाँ महिलाले पुरुषलाई नभन्ने ७ कुराबारे चर्चा गरिएको छ ।
१- एक महिला अर्की महिलासँग प्रेम गर्छे महिला पुरुषसँग मात्र आकर्षित हुन्छे भन्ने ठान्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा एक महिला अर्की महिलाको दुश्मन ठानिएपनि महिलाले महिलालाई एकदम प्रेम समेत गर्छन । कतिपय महिलालाई आकर्षक बनेर हिँड्ने महिलालाई बारम्बार देख्न मन समेत लाग्ने गर्छ ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमानको लिंग लामो भएको भन्दै श्रीमतिले हालिन मुद्दा !
२- पूर्व प्रेमीको निगरानी केटीहरुले विवाह भएपछि वा नयाँ प्रेम सम्बन्ध शुरु भएपछि पनि पहिलो प्रेमीलाई विर्सन सक्दैनन् । उनीहरुले पूर्व प्रेमिका गतिविधी नियालीरहेका हुन्छ्न् । उ कहाँ जान्छ । कोसँग भेट्छ वा कस्ता फेसबुक अपडेट राख्छ भन्ने कुरा केटीहरुले विचार गर्छन् ।
३- अश्लिल चलचित्र हेर्न महिलालाई पनि मन पर्छ अश्लिल चलचित्रका पारखी पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने सोंच्नु भएको छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । खासमा केटीहरु पनि अश्लिल चलचित्र हेर्न मन पराउँछन् । तर उनीहरुले यस्तो चलचित्र हेरेको कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार भने गर्दैनन् ।
४- आफ्नै शरीरसँग प्रेम हरेक महिलालाई सबैभन्दा बढी प्रेम आफ्नै शरीरसँग हुन्छ । खासमा शरीरको विषयमा पुरुषले गर्ने नकारात्मक टिप्पणीले कुनै पनि केटीको सबैभन्दा बढी चित्त दुख्छ ।
५- एक्लै हुँदा महिलाहरु अनेक हर्कत गर्छन् जुन अरु भएको बेला गर्न मिल्दैन । तर यो कुरा उनीहरुले अरुसँग भन्न मन पराउँदैनन् । ब्रा लगाएर नाच्नु वा विभिन्न पोज दिएर ऐना हेर्नु जस्ता क्रियाकलाप केटीहरुले एक्लै भएको बेला गर्छन् ।
६-इर्श्या कुनै पनि महिलाको लागि प्राकृतिक गुण नै हो भन्दा पनि हुन्छ । विवाह गरेपछि हतारमा आमा बन्न नचाहने केटी अरुका सन्तान देखेर भने इर्श्या गर्छन् । आफूलाई महिलाका समस्याका कारण दुखार्इ वा पीडा हुँदा पतिलाई पनि त्यस्तै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो उनीहरुलाई लाग्छ ।
७- हरेक महिलालाई आफ्ना पुरुष साथी वा पतिप्रति केही न केही कुरा लुकाएको शंका हुन्छ । उनीहरु त्यो कुरा जान्न चाहिरहेका हुन्छन् ।